Soosaarayaasha & Badeecadaha Beddelaya ee Fudud - Shiinaha Warshadda Beddelka ee Maareynta Fudud
ES420-26P-POE L2 Gigabit Maareynta Fudud ee Beddelka Helitaanka PoE
ES420-26P-POE waa sheyga loo yaqaan 'Gigabit Poe Ethernet switch' oo ay maamusho DCN, oo bixiya 24 10/100 / 1000Mbps RJ45 iyo 2 Gigabit SFP port, deked kasta waxay taageertaa shaqada tooska ah ee MDI / MDIX, waxayna ku guuleysan kartaa gudbinta xawaaraha siligga. Dhamaan dekedaha 24 waxay taageeraan shaqada PoE ee u hogaansanta heerka IEEE 802.3at waana gadaal la jaan qaadi kara 802.3af. ES420-26P-POE waxaa loo isticmaali karaa sida qalab kaabaya tamarta, waxayna si otomaatig ah u ogaan karaan una aqoonsan karaan qalabka tamarta leh ee buuxiya heerka iyo saadka p ...
ES420-10P-POE L2 Beddelka Maareynta Maareynta Fudud
ES420-10P-POE waxay bixin kartaa 8 * 10/100 / 1000M otomaatig ah MDI / MDIX oo lagu daray 2 * dekedda SFP oo xaqiijin karta gudbinta xawaaraha siligga. Waa is-horumarin buuxda Gigabit Lakabka 2 maaraynta isku-xirka shabakadda oo loogu talagalay in lagu xoojiyo baahiyaha waxqabadka sare ee helitaanka shabakadda Gigabit, sida WIFI AP, IP camera, IP phone iyo noocyada kale ee qalabka. Waxay leedahay 8 dekedood oo Gigabit RJ45 ah oo buuxa, waxayna ku siin karaan istiraatiijiyad QoS oo dhameystiran, shaqooyin hodan ah oo VLAN ah iyo maareyn iyo dayactir fudud, dhammaan astaamaha m ...